﻿﻿ soomaali - Sorah An-Nazi'at ( Those who Pull Out )
Noble Quran » soomaali » Sorah An-Nazi'at ( Those who Pull Out )
Kuna yidhi u tag Fircoon wuu xadgudbaye.
Oo ku dheh ma rabtaa inaad daahir noqotid.
Wuxuuna tusiyay (Nabi-Muuse) Aayad wayn.
Wuuse beeniyay oo caasiyay (Fircoon).
Wuuna jeedsaday isagoo xumaan la socda.
Wuxuuna kulmiyay (Askartii) una Qaylyay.
Isagoo dhihi waxaan ahay Eebihiinna sare.
Markaasaa Eebe Ciqaabay Aakhiro iyo Adduunba.
Arrintaasna waano yaa ugu sugan Ruuxii Eebe ka yaabi.
Ma idinkaa daran abuuridda masc Samada Eebaa dhisay.
Korna yeelay jurmigeeda ekeeyayna.
Habeenkeedana madoobeeyay Maalinteedana soo bixiyay (Ifiyay).
Dhulkana markaas ka dib fidiyay.
Biyahiisa iyo Daaqiisana soo bixiyay.
Si aad idinka iyo Xoolihiinnu ugu nacfidaan.
Markay timaaddo Musiibadii waynayd (qiyaamadu).
Maalintaas Dadku way xusuusan waxay faleen.
Nolosha Adduunyana doorta.
Wuxuu ku dheelman Naarta Jaxiimo.
Ruuxiise ka yaaba la kulanka Eebe Naftana ka reeba Hawada (xun).
Wuxuu u dheelman Janno.
Waxay ku waydiin Saacadda (Qiyaamaha) markay sugnaan.
Maxaa ku ogaysiiyay waqtigeeda.
Eebe umbuu ku dhammaan ogaansheheedu.
Waxay la mid noqon Malintay arkaan (Qiyaamada) yagon nagaanin Galab iyo Barqin mooyeen (Addunka).